AH: On the Road to Mandalay - Rudyard Kipling
ပထမဆုံး ကဗျာလေးကို မူရင်း အင်္ဂလိပ်လို အတိုင်း ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး..
ဒီကဗျာလေးမှာ အာရှဒေသ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကို လွမ်းဆွတ်နေတဲ့ အင်္ဂလိပ် စစ်သားတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဖော်ကျူးထားတဲ့ ကဗျာပါ။ ဒီကဗျာဟာ အရှေ့တိုင်း မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လှပမှု့နဲ့ သိမ်မွေ့မှု့ကို ဖော်ကျူးနေသလို၊ တစ်ချိန်ထဲမှာ လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု့၊ ၁၉နဲ့ ၂၀ ရာစု နှစ်တွေတုန်းက ဗြိသျှတွေရဲ့ နယ်ချဲ့စနစ်ကို အသက်ဝင်နေတဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေ ပါဝင်နေပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေဟာ ဧရာဝတီမြစ်တစ်လျှောက် ဧရာဝတီ ဖလော်ရီတာ သင်္ဘောလိုင်းရဲ့ ရေနွေးငွေ့သုံး ဒလက်သင်္ဘောတွေနဲ့ စုန်-ဆန်ပြီး သွားလာနေတဲ့ အချိန်ပါ။ ကစ်ပလင် စစ်သားဘ၀နဲ့ အန္ဒိယမှာ ၇နှစ်ကြာ စစ်မှု့ထမ်းပြီး အင်္ဂလန်ကို ပြန်လာတဲ့ အချိန် ၁၈၉၀မှာ ဒီကဗျာကို ရေးခဲ့တာပါ။ ကလ္လကတ္တားကနေ ဂျပန်၊ ပြီးတော့ အမေရိကန် ဆန်ဖရန်စစ်စကိုကနေ ပင်လယ်ကို ဖြတ်ပြီး အင်္ဂလန်ကို သူပြန်ခဲ့တာပါ။ ကလ္လကတ္တားပြီးတော့ မြန်မာပြည်ကို မော်လမြိုင်ကတစ်ဆင့် ရန်ကုန်ကို ခဏ အလည်ရောက်ခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော် သူ့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ကဗျာကို ဆီလျှော်အောင် မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ချွတ်ယွင်းချက်၊ လွဲမှားချက်တွေရှိရင် ထောက်ပြပေးကြပါ။
မော်လမြိုင်က ဘုရားဟောင်းဘေး… အရှေ့အရပ်ပင်လယ်ပြင်ဆီကို ငေးမောရင်း..
ထန်းပင်တွေကို ဝှေ့တိုက်လိုက်တဲ့လေကလေးရယ်.. စေတီတော်ဆီက ချိုလွင်လွင် ခေါင်းလောင်းသံ
“ပြန်လာခဲ့ပါ.. ပြန်လာခဲ့ပါ အမောင် ဗြိသျှစစ်သည်… မန္တလေးကို ပြန်လာခဲ့ပါ”
ရန်ကုန်-မန္တလေး အဆန်သင်္ဘော ရေရဟတ် ရက်သံလေးတွေကို အမောင် ကြားမိပါစ…
မန္တလေးကို သွားတဲ့ လမ်းမှာပေါ့…
ငါးပျံလေးတွေ ပျော်မြူး ဆော့ကစားလို့…
နေ၀င်ချိန်က တရုတ်ပြည် အပြင်ဖက် ကမ်းရိုးတမ်းမှာ လျှပ်တစ်ပျက်လို …
ဦးထုတ်စိမ်းဆောင်းပြီး ဂါဝန် အ၀ါရောင်နဲ့.. စုဖုရားလတ်ဆိုတဲ့ အမိငယ်…
ဘုရင်သီပေါရဲ့ မိဖုရားနဲ့ အမည်နာမ ဆင်တူချေရဲ့…
သူ့ကို ပြောင်းဖူးဖက်ဆေးလိပ်လေးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကမ်းပေးခဲ့တုန်းကပေါ့..
လုံမငယ်.. ရွံဆင်းတုတော် ခြေတော်မြတ်ရင်းကို ဦးခိုက်နမ်းလင့်….
ကြီးမြတ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား…လို့ သူတို့ ခေါ်ကြသတဲ့…
အို.. မတော်ပါဘူး အမောင်.. ဒီလိုနေရာမျိုးမယ်လို့.. အမိဆိုတုန်း
စပါးခင်းမှာ မြူတွေဆိုင်းလို့.. နေ၀င်လုလုအချိန်မှာ…
ဘင်ဂျိုလေးတီးပြီး “ကုလား လို လို…” ဆိုပြီး မင်း တေးသီခဲ့တာပ
ကိုယ့် ပုခုံးကို လက်ခလေးနဲ့ မှီလို့.. ပါးချင်းအပ်ပြီး…
မြစ်ထဲက ရေနွေးငွေ့သင်္ဘောတွေက ဥဒဟို.. ကျွန်းသစ်သယ်နေတဲ့ ဆင်တွေကို
ဒီလို ဆိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာ စကားပြောဖို့မင်း ဘာဖြစ်လို့ ကြောက်နေခဲ့တာလဲကွယ်..
မန္တလေးကို သွားတဲ့ လမ်းပေါ်မှာပေါ…
ခုတော့ အားလုံးက ဟိုးအဝေး အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပေါ့..
ဘဏ် ကနေ မန္တလေးကို သွားတဲ့ ခရီးသယ်ကားလဲ မရှိဘူးလေ..
ခုတော့ လန်ဒန်မှာ… စစ်သက် ၁၀နှစ်လောက်ရှိတဲ့ စစ်သည်ကပြောရဲ့
“တစ်ကယ်လို့ အရှေ့အရပ်က ခေါ်သံများကြားခဲ့ရင်… မင်းဘာလိုချင်ဆုံးလဲ..”
ထန်းပင်တွေပေါ်ဖြာကျနေတဲ့ နေခြည်နွေးနွေးရယ်.. ဘုရာကျောင်းက ခေါင်းလောင်းသံချိုချိုရယ်ပေါ့…
မန္တလေးကို သွားတဲ့ လမ်းမှာလေ…
ဒီလို ကျောက်သားလမ်းတွေပေါ်မှာ သားရေပွန်းခံပြီး လမ်းလျှောက်ရတာကို ငြီးငွေ့လှပါပြီ…
အင်္ဂလန်ရဲ့ မိုးငွေ့မှုန်မှုန်တွေ ပက်ဖျန်းတိုင်း ငါ့ရဲ့ အရိုးထဲက ဝေဒနာကို လှုပ်နှိုးနေသလိုပါပဲ…
ချဲလ်ဆီး အစွန်အရပ် ကနေ စထရန်းကို အိမ်အကူ၅၀လောက်နဲ့ လျှောက်ပေမယ့်…
အချစ်အကြောင်းကို သူတို့တွေ ပြောနေကြပေမယ့်၊ သူတို့ ဘာနားလည်လို့လဲ…
ညစ်နွမ်းနွမ်း ခေါက်ရိုးကျိုး မျက်နှာတွေနဲ့…
အိုသခင်.. သူတို့နားလည်တာ ဘာများရှိလို့လဲ…
ငါ့မှာ သပ်ရပ်၊ ချိုသာတဲ့ အဖော်မွန်က သန့်ရှင်းပြီး စိမ်းလန်းတဲ့ မြေမှာ ရှိတယ်..
စူးအက် အရှေ့ပိုင်း ဒေသကို စေလိုက်စမ်းပါလေ… အဲ့ဒီမှာ အကောင်းဆုံးဆိုတာမျိုးက အဆိုးဆုံးလိုပဲ
ပညတ်တော်၁၀ပါးမရှိတဲ့ နေရာမှာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ငတ်မွတ်မှု့ကို လောင်မြိုက်လို့ ရတာပေါ့
စေတီဆီက ခေါင်းလောင်းခေါ်သံတိုင်း ငါရောက်ချင်တဲ့နေရာက….
မော်လမြိုင်က ဘုရားဟောင်းတစ်ဆူဘေး ပင်လယ်ပြင်ကို လေးလေးလံလံ တွေငေးကြည့်လို့..
ငါတို့ မန္တလေးကို သွားခဲ့တုန်းက ရွက်ဖျင်အောက်က ဝေဒနာတွေနဲ့အတူ..
မန္တလေးကို သွားတဲ့ လမ်းမှာပေ့ါ..
Posted by AH at 8/12/2018 01:42:00 PM